रोचक खबर Archives - Tanahu Post
एजेन्सी । हरेक मानिसको आ–आफ्नै इच्छा र चाहना हुन्छ । आफ्नो शौख पूरा गर्न हरेक मानिस लालयित हुने गर्छन् । अझ सेलिब्रेटीहरुका त शौख अनौठा किसिमका हुन्छन् । हो यस्तै एक अभिनेत्रीको शौख सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने खालको छ । हलिउडकी ४९ वर्षीया अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टनको अनौठो बानी छ । उनले आफ्नो अनौठो बानीबारे खुलासा गरेकी हुन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफूलाई निर्वस्त्र भएर टेलिभिजन हेर्न मज्जा आउने बताएकी छन् । एनिस्टनका अनुसार उनलाई नांगै भएर टीभी हेर्ने बानी नै परिसकेको छ । अन्तर्वार्तामा नुहाउँदा, सम्भोग गर्दा र पौडी खेल्दा बाहेक अरु के गर्दा तपाइँलाई निर्वस्त्र हुन मन लाग्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले आफूलाई नांगै भएर टीभी हेर्न मनपर्ने बताएकी हुन् ।osnepal प्रतिक्रिया दिनुहोस्
एजेन्सी । सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार, प्रस्तोताको पेसा गति प्रतिवद्ध हुन्छ भन्ने एउटा घटनाले देखाएको छ । जुन घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ । लाइभ समाचारका क्रममा एकजना समाचार वाचकको नाकबाट रगत बगिरहेको भिडियो भाइरल बनिरहेको हो । उक्त भिडियो कोरियाको एक टेलिभिजन च्यानलको हो । एसपीओ टीभीको ट्वीटर ह्याण्डलबाट एउटा भिडियो शेयर गरियो । भिडियोमा देखिन्छ कि दुईजना पत्रकार समाचार वाचन गरिरहेका छन् । ती दुई पत्रकारमध्ये एकजनाको नाकबाट रगत बगिरहेको छ । नाकबाट रगत बगे पनि ती पत्रकार त्यहाँबाट उठेर हिँड्ने वा रोकिनेवाला छैनन् । उनले आफ्नो काम जारी राख्छन् । नागबाट रगत बगिरहँदा पनि समाचार वाचनमा खट्ने ती पत्रकारको नाम ह्यून इल हो । उनको नाकबाट रगत बगेको देख्दा उनका सहकर्मी आत्तिन्छन् । तर उनी निर्धक्क देखिन्छन् । सोसल मिडियामा यो भिडियो निकै भाइरल भएको छ । धेरैले ह्यू
वाशिङ्टन, अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा पहिलोपटक एक हिन्दू महिलाले उम्मेदवारी दिने तयारी थालेकी छिन् । अमेरिकाकी प्रथम हिन्दू सांसद तुलसी गबार्डले २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन लागेकी हुन् । उनले यस विषयमा अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपाली तथा भारतीय मूलका मतदातासँग राय मागेकी छिन् । ३७ वर्षकी तुलसीले हवाइ राज्यबाट ४ पटकसम्म सांसद पदमा निर्वाचन जितिसकेकी छिन् । उनी अमेरिकाकी प्रथम हिन्दू सांसद हुन् । तुलसीले हरेक पटक चुनाव जित्दा विशाल अन्तरले प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गरेकी छिन् । राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि उनी सैनिक थिइन् । अमेरिकी सेनामा रहँदा उनी १२ महिनासम्म इराकमा तैनाथ भइसकेकी छिन् । यदि उनले उम्मेदवारीको घोषणा गरिन् भने अकेरिकामा इतिहास बन्नेछ । अहिलेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा कुनै पनि हिन्दूले उम्मेदवारी दिएका छैनन् । यदि उनले राष्ट्रपति निर्वाचन जितिन् भने एकैपटक ३
छोरा जन्मिएको खुसीयालीमा छरछिमेक, आफन्त, नातागोतालाई बोलाएर भोजभतेर गर्ने चलन थियो । तर उहाँ जन्मिदा घरमा कुनै खुसीयाली आएन । बरु आमाबुवा चिन्तित भए । छरछिमेकले परिवारलाई जिउँदै गाड्न सुझाए । कारण थियो, जन्मजात शारीरिक अपाङ्गता । उहाँ अर्थात नन्दराज भट्ट । जन्मजात दुवै हातखुट्टा नभएको । शरीरमा हात र खुट्टाको कुहिनोसम्मको आकार मात्र थियो । त्यसैले त उहाँका आमाबुवालाई आफन्त र छरछिमेकले त्यस्तो सन्तान पालेर के गर्छौ, खोलामा गाड भन्नेसम्मको सल्लाह दिए । जन्मिदा धेरैको हेयको पात्र बन्नु भएका तिनै नन्दराज अहिले भने अपाङ्गता भएकाहरुका लागि मात्र होइन, सपाङ्गहरुका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल हुनुभएको छ । कारण हो, दुवै हातखुट्टा नभएर पनि उहाँले गरिरहेको संघर्ष र प्राप्त सफलता । २०४५ सालमा बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–३, मा दुवै हातखुट्टाविहीन भएर जन्मिएका नन्दराजले शारीरिक अपाङ्ता
मानिसहरुको जन्म हुदा पहिला उनिहरुको यौनांगका आधारमा बच्चाहरुको लिंग पहिचान गरिन्छ । यस्तैमा हाल मात्र बेलायतमा एउटा कुरा सार्वजनिक भएको छ की त्याहाँ एक युवा छन् । जसको यौनांगनै छैन् । उनको जन्दानै यौनांग थिएन रे । सुन्दै अच्चमै लाग्दो है । त्यो भन्दा पनि अच्चमै लाग्दो त झन अर्को कुरा छ । बेलायतको म्यानचेष्टरमा बस्ने ति युवाले अहिलेसम्म १ सयभन्दा धेरै महिलासँग यौन सम्पर्क गरिसकेको दाबी गरेका छन् । एन्ड्रयू वार्डल नामका ती पुरुष जन्मजात रुपमा ब्लेडर एक्सट्रफी नामक अनौठो रोगको सिकार थिए । जसका कारण उनको यौनांग शरीर बाहिर विकास भएन । यसतो अनौठो रोग लागेकाहरुको यौनांग शरीर बाहिर विकास हुदैन । वार्डलको बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री नै बनाइएको छ । जसमा उनले अहिले सम्म सयौं केटीहरु संग यौन सम्पर्क गरेको दावी गरेका छन् । चने अहिलेपनि एकजना युवतीसँग उनी डेट गरिरहेका छन् । वार्डलका अन’सार उनी महिलाला
एजेन्सी । रोचक र घोचक कुराले मानिसहरुले मनोरञ्जनका साथ आनन्द पनि लिने गर्छन् । तर संसारमा यस्ता रोचक कुराहरु पनि छन् जस्लाई देख्दा हेर्नेहरु पनि छक्क पर्छन् । कसैको २ वटा, खुटा त कतिका दुई वटा मुटु त कतिपयका ३ वटा स्तन जस्ले मानिसहरुको ध्यान खिचे पनि उनीहरुलाई यस्तो असहज परिस्थितीले कति पिडा दिन्छ होला रु यि अवस्थाहरुको मानिसले सामना गर्न परिरहे पनि यस्ता कुराहरुको संख्या अस्ति भन्दा हिजो र हिजो भन्दा आज बढी नै रहेका छन् ।जसको पछिल्ले उदाहरण हुन् काङ्गकाङ्ग नाम गरेका यि बालक । जसका दुई वटा मुख रहेका छन् । यि बालकको तस्बिर हेरेपछि मानिसहरुले मास्क लगाएको जस्तो अनुभव गर्ने गरेका छन् । तर पनि जन्मजात नै दुईवटा मुख भएका यि बालकलाई हेर्न हजारौँको संख्यामा उनको घरमा पुगने गरेका छन् ।
पाँचथरमा एउटा अचम्मको गाई छ । सो गाईले नौ वर्षदेखि लगातार दूध दिइरहेको छ । यस बीचमा गाई ब्याएको पनि छैन र थाकेको पनि छैन । यो गाई हो फिदिम नगरपालिका ११ निवासी नरमाया र तेजप्रसाद न्यौपानेको। २०६६ साल कात्तिकमा गाई ब्याएको थियो । त्यहा यता लगातार दूध दिइरहेछ। तेजप्रसादले नजिकैको फेवादिनका रामप्रसाद न्यौपानेको घरबाट २० हजार रुपैंयाँमा किनेका थिए । यो अचम्मको गाईले सधैं करिब दुई लिटर दूध दिइरहेको नरमाया बताउँछिन्। गाईले पहिलो र दोस्रो बर्ष ६ लिटर दूध दिएको थियो । तेस्रो बर्षवाट घटेर चार लिटर दिन थाल्यो ।गाई किन्दा तेजप्रसादका छोरा गणेश १२ कक्षामा पढ्थ्यो, उसले बीएड पास गरिसक्यो । त्यसपछि भाषा शिक्षा अध्ययन गरेर कोरिया गएको पनि ३० महिना पुरा भयो, गाई थाकेको छैन निरन्तर दूध दिइरहेछ । तेजप्रसाद भन्छन्, ‘पहिले दुःख थियो । छाप्रोमा बस्थ्यौं । गाई लक्षिनको भएकै कारण हो क्यार छोराले डिप्लोमा सम
हामी सानै हुँदा अनि देखि त्यस्ता धेरै धेरै भनाइ वा उखान सुन्दै आएका हुन्छौं। कतिले हामीलाई बिस्वासमा पार्छन् भने कति बेकारका लाग्छन्। तर कतिपय यस्ता पुराना भनाइहरु बिज्ञानले पनि सत्य हुन्छ भनेर साबित गरेको छ। हामीले सुन्दै आएका कुराहरु जस्तै:खुर्सानि ओसिएमा पानी पर्छ,भ्यागुति चलाए छाला चिलाउंछ, गर्भवति हुंदा टन्न केरा खए छोरा हुन्छ,दुध धेरै खाएमा बच्चा गोरो जन्मिन्छ आदि र अन्य धेरै। यस्ता भनाइहरु केहिमा सत्यता नभए पनि केहि भने सत्य हुने बिज्ञानले पनि मानेको छ। के गर्भवति हुँदा टन्न केरा खाए छोरा नै हुन्छ त? अक्स्फोर्ड बिस्वबिध्यालयका बिद्वानहरुले बर्षौंदेखि मानिदै आएको अन्धबिस्वासलाई तोड्ने नियतले एक समुह बनाई अध्ययन गरेका थिए र नतिजामा उनिहरुले के पाए भने अधिकांस अब्सथामा धेरै केरा खाँदा छोरा नै हुन्छ। यसको लागि उनिहरुले ७४० गर्भवति महिलाहरु लाई सहव्हागि गराएका थिए। सहभाइहरु मध्य
यि अनौठा स्थान जहाँका महिलाहरु सजिलैसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाउनको लागि राजी हुन्छन
सेक्स’ भन्ने बित्तिकै हिन्दु राष्ट्र लगायत विश्वको विभिन्न देशहरुमा मानिसहरु लजाउने गर्दछन् र यसको धक खोलेर बोल्न लाज मान्छन । कतिपय त यसको बारेमा खुलेर पनि कुरा गर्दैनन् । यी कुराहरु एकातिर राखेर विश्वमा यस्तो पनि देशहरु रहेका छन् जहाँको महिलाहरु सेक्सको लागि आग्रह गरेपछि हत्तपत्त नाई भन्दैनन् । आज हामी विश्वको यस्तो ५ देशहरुको बारेमा चर्चा गर्दैछौ जहाँ सेक्स फ्रि गरिएको छ । इस्टोनिया यहाँको महिलाहरु सुनौलो कपाल भएका हुन्छन् र सजिलैसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाउनको लागि राजी हुने भनेर प्राय चिनिने गरिन्छन् । यहाँको नाईट क्लबमा छिर्ने बित्तिकै तपाईलाई एक न एक महिलाले आफै मन पराउने गर्दछन् र तपाईसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाउनको लागि राजी पनि हुने गर्दछन् । ब्राजिल यो देश विश्वमा नै निकै राम्री केटीहरु भएको देश भनेर चर्चित रहेको छ । यहाँको महिलाहरु कुनै पर्यटकसँग सम्बन्ध बनाउनको लागी निकै न
९६ वर्षीय हजुरआमा बनिन् ‘क्लास टपर
अरे ! ९६ वर्षीय हजुरआमालाई हेर, आफ्नो ज्वाईँलाई पछि पार्दै कक्षा टप गरकी छिन् । भारतको केरलामा ९६ वर्षीय कार्तियानी अम्माले आफ्नो ज्वाईँलाई पछि पार्दै कक्षा टप गरेकी छिन् । केरलामा साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत भएको परीक्षामा ९८ प्रतिशत अंक ल्याउँदै उनी कक्षा टप गर्न सफल भएकी हुन् । यो कार्यक्रम केरल राज्य साक्षरता अन्तर्गत शुरू गरिएको हो । राम्रो साक्षरता दर भएको राज्य केरलले शतप्रतिशत साक्षरताका लागि यो कार्यक्रम शुरू गरेको हो । कार्तियानीसँगै उनका ज्वाईंले पनि तीन कक्षाको परीक्षा दिएका थिए तर सासूभन्दा १० नम्बर कम ल्याए । कार्तियानी भन्छिन्, ‘म र मेरा ज्वाईं दुवैले परीक्षा दिएका थियौं । तर उनले परीक्षामा उत्तर बिर्से । मैले सबै सही उत्तर दिएँ ।’ उनका ज्वाईंले मात्रै ८८ प्रतिशत ल्याएका छन् । बीबीसी संवाददातासँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छिन् ‘म अब पढिरहने हो । छिट्टै